October 1, 2021 - Channel Lover
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစွဲဆိုထားသည့်အမှုအတွက် သက်သေထွက်ဆိုခဲ့တဲ့ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း
October 1, 2021 by Channel Lover
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစွဲဆိုထားသည့်အမှုအတွက် သက်သေထွက်ဆိုခဲ့တဲ့ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စွဲဆိုထားတဲ့ အဂတိမှု လေးမှုကို ဒီနေ့ နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့အထူးတရားရုံးမှာ စတင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအမှုလေးမှုထဲက သုံးမှုရဲ့ သက်သေတွေကို ဒီနေ့မှာ စစ်ဆေးခဲ့ပြီး အဲဒီထဲက ရာဇဝတ်ကြီးအမှုအမှတ် ၂ ဖြစ်တဲ့အမှုမှာတရားလိုပြသက်သေအဖြစ် ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက လာရောက်ထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်က ပြောပါတယ်။ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ဘာတွေထွက်ဆိုခဲ့ပါသလဲ။ ရုံးရှေ့ရောက်လာတဲ့ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့အခြေအနေသွင်ပြင်က ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။ credit unicode ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကိုစှဲဆိုထားသညျ့အမှုအတှကျ သကျသထှေကျဆိုခဲ့တဲ့ ဦးဖွိုးမငျးသိနျး နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို စှဲဆိုထားတဲ့ အဂတိမှု လေးမှုကို ဒီနေ့ နပွေညျတျောမှာရှိတဲ့အထူးတရားရုံးမှာ စတငျစဈဆေးခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီအမှုလေးမှုထဲက သုံးမှုရဲ့ သကျသတှေကေို ဒီနမှေ့ာ စဈဆေးခဲ့ပွီး အဲဒီထဲက ရာဇဝတျကွီးအမှုအမှတျ ၂ ဖွဈတဲ့အမှုမှာတရားလိုပွသကျသအေဖွဈ ရနျကုနျတိုငျးဝနျကွီးခြုပျ ဦးဖွိုးမငျးသိနျးက လာရောကျထှကျဆိုခဲ့တယျလို့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ရှနေ့ေ ဦးခငျမောငျဇျောက … Read more
မိန်းမကိုယ် ဘာလို့ယားလဲ…ပျောက်အောင် ဘယ်လိုကုနိုင်မလဲ…
မိန်းမကိုယ် ယားယံခြင်း က တော်တော်ခံရခက်ပြီး ဆိုးရွားတဲ့ အရာတစ်ခုပါပဲ ။ ဒီလို ယားယံခြင်းကြောင့် အဆင်မပြေ ဖြစ်မှုတွေ များစွာ ကြုံတွေ့ရပါတယ် ။ မိန်းမကိုယ် ယားယံခြင်းဟာ ရောဂါ မဟုတ်သော်လည်း အခြားရောဂါ တစ်ခုခု၏ လက္ခဏာတစ်ခုတော့ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ် ။ မိန်းမကိုယ် ယားယံရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကတော့ ၁ ။ ဘတ်တီးရီး များပေါက်ဖွားခြင်း ၂။ အဖြူစွဲခြင်း ၃။ ဆီးခုံမွှေး ရိတ်ထားခြင်း ၄။ ပွေး ၊ ဝဲ ပေါက်ခြင်း ၅။ အမွှေးအမျှင်တွင်မှိုစွဲခြင်း ၆။လိင်ဆက်ဆံရာမှတဆင့်ပိုးဝင်ခြင်း ၇။မှိုစွဲခြင်း ၈။ အမျိုးသမီးအင်္ဂါတွင် ကြွက်နို့ပေါက်ခြင်း ၉။ ဆီးချောင်း(ကျင်ချောင်း) ရောင်ခြင်း ၁၀ ။Psoriasis အရေပြားရောဂါ ၁၁။ လိင်အင်္ဂါ … Read more
အိမ်တစ်အိမ်မှာ အမြဲလာဘ်ပွင့် အိမ်အေးချမ်းနေအောင် ဒါတွေလုပ်ပါ
အိမ်တစ်အိမ်မှာ အမြဲလာဘ်ပွင့် အိမ်အေးချမ်းနေအောင် ဒါတွေ လုပ်ပါ 1 ၊ ဘုရားပန်း နှင့် သောက်တော်ရေ ဆွမ်း ဆီမီး အမြဲကပ်ပါ။ ဘုရားပန်း မနွမ်းပါစေနဲ့ ဘုရားပန်းအိုးထဲမှ ရေများ မပူပါစေနဲ့။ သောက်တော်ရေကို သတိရတိုင်းကပ်ပါ2၊ ဘုရားရှိခိုးလျင် အိမ်စောင့်နတ် ခြံစောင့်နတ် အိမ်ဝန်းအတွင်း မှီတင်းစောင့်ရှောက်နေထိုင်ကြသော နတ်မြတ်နတ်ကောင်းများ မြင်အပ် မမြင်အပ် သတ္တဝါများ အားလုံးကို မေတ္တာပို့ အမျှဝေပါ3၊ အလွန် ကံညံ့လာဘ်ပိတ်နေလျင် ညသန်းခေါင် ပရိတ်ရွတ်ပါ။ ည 12နာရီနောက်ပိုင်းသည် နတ်မြတ်နတ်ကောင်းများလူ့ပြည်သို့လှည့်လည် ကြည့်ရှုချိန်ဖြစ်၍ ညဘက် ပရိတ်ရွတ်ဖတ် ဆုတောင်းလျင် ပို၍ ဆုတောင်းပြည့်စေပါတယ်4၊ အိမ်မှာ အဟောင်းအစုတ်တွေ မထားပါနဲ့။ … Read more
တစ်ဖွဖွနဲ့ ပူဆာတဲ့အချိန်တုန်းက ၀ယ်မပေးနိုင်ခဲ့လို့ တောင်းပန်စာရေးလိုက်တဲ့ သူရဲကောင်းမလေး
တဖွဖွနဲ့ ပူဆာနေတဲ့ အချိန်တုန်းက မဝယ်ပေးနိုင်ခဲ့လို့ တောင်းပန်ပါတယ်.. စိုင်း ရေ….. တကယ်ဆို ဒီပုံထဲမှာ ယူနီဖောင်းအပြည့်အစုံနဲ့ လက်နှက်ရပြီဆိုပြီး.. အရမ်းပျော်နေတဲ့သူက နင် ဖြစ်နေရမှာကို အခုတော့ နာကျည်းချက်တွေနဲ့ လက်နှက် ကိုင်ထားရတဲ့သူက ငါ ဖြစ်နေပါရော့လား…. ကျေနပ်ပါ..စိုင်းရေ.. ကောင်းရာမွန်ရာ ဘုံဘဝကနေကြည့်ပြီး.. ပြုံးပျော်နေနိုင်ပါစေ…စိုင်းရေ…..💜 လို့ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ #pdfchannel unicode တဖှဖှနဲ့ ပူဆာနတေဲ့ အခြိနျတုနျးက မဝယျပေးနိုငျခဲ့လို့ တောငျးပနျပါတယျ.. စိုငျး ရေ….. တကယျဆို ဒီပုံထဲမှာ ယူနီဖောငျးအပွညျ့အစုံနဲ့ လကျနှကျရပွီဆိုပွီး.. အရမျးပြျောနတေဲ့သူက နငျ ဖွဈနရေမှာကို အခုတော့ နာကညျြးခကျြတှနေဲ့ လကျနှကျ ကိုငျထားရတဲ့သူက ငါ ဖွဈနပေါရော့လား …. ကနြေပျပါ .. စိုငျးရေ.. ကောငျးရာမှနျရာ ဘုံဘဝကနကွေညျ့ပွီး.. ပွုံးပြျောနနေိုငျပါစေ…စိုငျးရေ…..💜 … Read more
(၇)ရက်သားသမီးများအတွက် အောက်တိုဘာ(၁)ရက်မှ (၇)ရက်အတွင်း တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ၂၀၂၁ အောက်တိုဘာလ (၁)ရက်မှ ၊ (၇)ရက်အတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း အကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘောဆောင်သည့် ကောင်းသောဟောချက်များ မှန်ကန်၍ ၊ အနိဌသဘောဆောင်သည့် မကောင်းသောဟောချက်များ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားပါစေသတည်း။ …. ။ မိတ်ဆွေတို့၏ကောင်းကျိုးများကို အစဉ်လိုလားသော မင်းသိမ်းခိုင် – ရွှေရမ်းထူးလင်း တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် ဟောစာတမ်း တနင်္လာသားသမီးများအတွက် ဟောစာတမ်း အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် ဟောစာတမ်း ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက် ဟောစာတမ်း ကြာသပတေးသားသမီးများအတွက် ဟောစာတမ်း သောကြာသားသမီးများအတွက် ဟောစာတမ်း စနေသားသမီးများအတွက် ဟောစာတမ်း unicode မိတျဆှမြေားအားလုံးအတှကျ ၂၀၂၁ အောကျတိုဘာလ (၁)ရကျမှ ၊ (၇)ရကျအတှငျး ဆောငျရနျ ၊ ရှောငျရနျ … Read more
လွတ်မြောက်နယ်မြေကနေ ပရိတ်သတ်တွေကို သီချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ ဖျော်ဖြေပေးလိုက်တဲ့ မင်းမော်ကွန်း
ပရိသတ်အချစ်တော် မင်းမော်ကွန်းကတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေမှာရော နှင်းဆီအငြိမ့်မှာရော အောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့် ပြည်သူတွေရဲ့အချစ်တွေကို သိမ်းပိုက်ထားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ မင်းမော်ကွန်းကတော့ အနုပညာမှာလည်း ကျရာဇာတ်ရုပ်ကနေ သရုပ်ဆောင်နိုင်သလို အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်း နာမည်ပျက်မရှိအောင် နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာလောကမှာလည်း ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးဇင်ဝိုင်းကိုလည်း လူတိုင်းကလေးစားအားကျရသလို သားဖြစ်သူ မင်းမော်ကွန်းကလည်း အမှန်တရားဘက်ကို ရဲရဲဝင့်ဝင့်နေရဲသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်.။ ပြည်သူတွေရဲ့အတူ ခံစားချက်တွေထပ်တူကျခဲ့သူဖြစ်တဲ့အပြင် ဖခင်ဖြစ်သူ အဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာလည်း နောက်ဆုတ်မသွားတဲ့အပြင်ရှေ့ကိုသာဆက်လက်ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ အဖေဖြစ်သူရော သားဖြစ်သူပါ ရဲရင့်ပြတ်သားစွာ ရှိနေခဲ့ကြလို့လည်း ပြည်သူတွေလည်း အားအင်တွေအပြည့်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူးနော်.. မင်းသားမင်းမော်ကွန်းကတော့ လူကိုယ်တိုင်လည်း ပါဝင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီး လူများနည်းတူ လူမှု့ကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်ကနေလည်း ဆက်လက်ပြီးတော်လှန်နေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်.။ နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခံဝန်ကတိထိုးဖို့တွန်းအားပေးခံခဲ့ရပေမယ့် နောက်မဆုတ်ဘဲ ပန်းတိုင်ကို မရောက်ရောက်အောင် လျှောက်လှမ်းနေဆဲပါပဲနော်။တော်လှန်ရေးအတွက် အုတ်တစ်ချက် သဲတစ်ပွင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ မင်းမော်ကွန်းဟာလောလောဆယ်မှာလွတ်မြောက်နယ်မြေတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့လည်း သိရှိရပြီး သူကတော့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီး အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ … Read more
မကြာခင် ဖျင်ခံဖို့သာပြင်ထား မင်းအောင်လှိုင်ဆိုပီး ပြောပြလာတဲ့ မင်းမော်ကွန်း
မကြာခင် ဖျင်ခံဖို့သာပြင်ထား မင်းအောင်လှိုင်ဆိုပီး ပြောပြလာတဲ့ မင်းမော်ကွန်း ပရိတ်သတ်တွေ သိပြီးကြတဲ့အတိုင်း မင်းမော်ကွန်းဟာဆိုရင်တော့ လွတ်မြောက်နယ်မြေကနေ စကစတွေကို ဒီမိုကရေစီအတွက် တိုက်ပွဝင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…။ သူကတော့ အခုလိုပဲ ကြုံးဝါးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…။ နိုင်ငံ​ရေးအရဘယ်လိုမှမနိုင်လို့စစ်အာဏာသိမ်းတာပဲ နိုင်ငံ​ရေးအရ ရှုံးပြီးသား သံတမန်​ရေး​ကောကြည့်မလား ဦး​ကျော်မိုးထွန်းကပြည်သူ့ဘက်​တော်သားဗျ စစ်​ရေး​ရော ခင်များတို့အပိုင်တွက်ထားတဲ့အကွက်က သိပ်လှ​ပေမယ့် မရ​တော့ဘူး မအလ ​ရေ PDF အင်အား(မ​ဖော်ပြလို) တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်​တွေပါဝင်​​နေကြတာဆို​တော့ မကြာခင် ဖင်ခံဖို့ပြင်ထား မင်း​အောင်လှိုင်​ရေ unicode မကွာခငျ ဖငျြခံဖို့သာပွငျထား မငျးအောငျလှိုငျဆိုပီး ပွောပွလာတဲ့ မငျးမျောကှနျး ပရိတျသတျတှေ သိပွီးကွတဲ့အတိုငျး မငျးမျောကှနျးဟာဆိုရငျတော့ လှတျမွောကျနယျမွကေနေ စကစတှကေို ဒီမိုကရစေီအတှကျ တိုကျပှဝငျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ…။ သူကတော့ အခုလိုပဲ ကွုံးဝါးထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ…။ နိုငျငံ​ရေးအရဘယျလိုမှမနိုငျလို့စဈအာဏာသိမျးတာပဲ နိုငျငံ​ရေးအရ ရှုံးပွီးသား … Read more
ထိုင်းချဲ 3D Live တိုက်ရိုက်စနေပါပီဗျာ … အားလုံးချဲပေါက်ကြပါစေ
October 1, 2021 October 1, 2021 by Channel Lover
ထိုင်းချဲ 3D Live တိုက်ရိုက် ကြည့်ရန် ရှယ်ထားပါ…. ထီပေါက် ချဲပေါက်ဂါထာတော် ၁။သီဝလီ စ မဟာနာမံ၊ သဗ္ဗလာဘံ ဘဝိဿတိ။ ထေရဿ အနုဘာဝေန၊ သဗ္ဗေ ဟောန္တု ပိယံ မမ။ ၂။သီဝလိ စ မဟာဝီရော ယေ ယေ ပဿန္တု မံ ပိယံ။ တေ တေ ပဿန္တု ပရမံ၊ ဇနပဒါ ပူဇယန္တု။ ၃။သီဝလိ နာမ ထေရေန၊ မမသီသေ ဌပေတွာန၊ ဇမ္ဗူဒီပ မဏ္ဍလေန၊ ဇယောမန္တာ သုခါဝဟံ။ ၄။သီဝလိ စ မဟာနာမံ၊ ဣန္ဒာဒေဝါ သဗြဟ္မကာ။ မနုဿပုရိသော ဣတ္ထိ၊ မဟာလာဘံ ဘဝိဿတိ။ ၅။သီဝလိ စ မဟာလာဘံ၊ နာနာဒေဟိ … Read more
(၁၆)နှစ်သားကောင်လေးနဲ့ချစ်သူဖြစ်ပီး ချိန်းတွေ့မိတဲ့ (၄၀)ကျော် အပျိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်
(၁၆)နှစ်သားကောင်လေးနဲ့ချစ်သူဖြစ်ပီး ချိန်းတွေ့မိတဲ့ (၄၀)ကျော် အပျိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ် တစ်ခါတုန်းက ပဲ အရမ်းများ တဲ့ အပျို ကြီး တယောက်ဟာ သူ့ကို ချစ်ခွင့်ပန်တဲ့သူတိုင်း အိုက်တင်အရမ်းခံပြီး ငြင်းပယ်ရင်းနဲ့အသက် (၄၀) ကျော်သွားတော့ သူ့ကို ကြိုက်မဲ့သူ မရှိတော့ဘူး ဒါနဲ့ နောက်ဆုံး ရှားရှား ပါးပါး (၁၆) နှစ်သားကောင်လေး ချစ်သူတယောက် ရ လိုက်တယ်တိုတိုပြောရရင် ကောင်လေးရဲ့ ချိန်းဆိုမှုနဲ့အတူ ကန်ဘောင်ပေါ်ကို အပျိုကြီးတယောက် ရောက်လာပါတော့တယ် ဒါနဲ့ကန် ဘောင်မြက်ခင်းပေါ် စကားစပြော တယောက်နဲ့တယောက် ဘယ်ဘဝထိ ချစ်ကြမည် ဖြစ်ကြောင်း စသဖြင့်ပေါ့ ထီးလေးကွယ်ရင်း ကောင်လေးက အပျိုကြီးကို အနမ်းတွေပေးပြီး အရမ်းဖက်ထားတော့တယ် ပြသနာ က အဲ့မှာ စပြီ အပျိုကြီးတယောက် ရည်းစား မထားခဲ့ဖူးဘူးတော့ ရှက်သွေးတွေဖျာ … Read more
မုံရွာ၊ ဇလုပ်အဝိုင်းပတ်ဂိတ်ကို ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂ ဦး သေဆုံး (ရုပ်/သံ)
မုံရွာ၊ ဇလုပ်အဝိုင်းပတ်ဂိတ်ကို ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂ ဦး သေဆုံး (ရုပ်/သံ) ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာမြို့နယ်၊ ဇလုပ်အဝိုင်းပတ်ဂိတ်တွင် ယနေ့ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက် နံနက် ၈ နာရီဝန်းကျင်တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီး စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂ ဦး သေဆုံးကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါ ပေါက်ကွဲမှုကို Monywa The Boys နှင့် Monywa UG Group တို့က ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဗီဒီယိုကို တပါတည်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ပျော်ကြသလား ပြည်သူအပေါင်းတို့ credit မုံရှာ၊ ဇလုပျအဝိုငျးပတျဂိတျကို ပေါကျကှဲမှုကွောငျ့ စဈကောငျစီတပျဖှဲ့ဝငျ ၂ ဦး သဆေုံး (ရုပျ/သံ) ရနျကုနျ၊ အောကျတိုဘာ … Read more